एजेन्डा २०२१ मा सफल विपक्षी तयार गर्न ▷ तपाईं पास हुनुहुनेछ! | गठन र अध्ययन
तपाईंले निर्णय गर्नुभयो एक विपक्ष अध्ययन। त्यसैले हामीसँग हाम्रो भविष्यको बारेमा पहिले नै स्पष्ट विचार छ। तर अब अर्को आधारभूत अंश आउँछ जुन एकको लागि अप्ट इन गर्नु हो। हामीले त्यो पेशा महसुस गर्नु पर्छ जसले हामीलाई कुन शाखा तान्नु पर्ने बताउँछ। यसका अतिरिक्त हामीसँग भएका शीर्षकहरूबारे पनि सोच्नुहोस्, किनकि हामीलाई राम्ररी थाहा छ कि यो एक महान आवश्यकता हो।
एक पटक हामीले मनलाग्दो विरोध गरे जुन हामीलाई मन पर्छ वा त्यसले हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ, हामीले एजेन्डा किन्नु पर्छ। हामी अहिले यसलाई समात्न सक्छौं, यसैले तल तपाईंले पाउनुहुनेछ प्रतिस्पर्धी परीक्षाको syllabi जुन धेरै रोजगारीका अवसरहरू हुन् अहिले।
धेरै मांग गरिएको प्रतिस्पर्धा
विपक्ष पोस्ट गर्नुहोस्
हुलाक कार्यालय एजेन्डा
फायर ब्रिगेड एजेन्डा
सिभिल गार्ड विपक्षमा
सिभिल गार्ड एजेन्डा
सिभिल गार्ड विपक्षमा: सबैभन्दा धेरै मांग गरिएको प्रतिस्पर्धा सिभिल गार्ड हो। सुरक्षा ब्यक्तिहरू सँधै अनुरोध गरिएको मध्येका एक हुन्। केही प्रतिस्पर्धी परीक्षा जसको मुख्य आवश्यकता ESO डिग्री हुन आवश्यक छ, १ 18 बर्षको हुन र 40० बर्ष भन्दा बढि उमेरको छैन।तपाईको परीक्षा शारीरिक परीक्षण (गति, धीरज, पौंडी ...) र सैद्धान्तिक भागमा विभाजित छ (हिज्जे, भाषा) , साइकोटेक्निक्स र व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता)।
फायर फाइटरहरूको लागि विरोध: यी फायर फाइटर प्रतियोगिताहरूमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि तपाईलाई स्नातक डिग्री वा बराबरको साथै १ 16 वर्ष पुरानो हुनु आवश्यक छ। परीक्षा पनि एक सैद्धांतिक भाग र एक व्यावहारिक भाग (रोप क्लाइम्बि weight, वेट लिफ्टि,, पुश-अप, दौड, स्विमि and र ठाडो जम्प) बाट बनेको छ। साइको टेक्निक्स र चिकित्सा परीक्षणले पार गर्नु पर्ने अंशहरू पूर्ण गर्दछ। एकचोटि तपाईको स्थान हुन्छ, तपाईले बिभिन्न किसिमका कामहरू गर्नु हुनेछ जस्तै खाली स्थानहरू, आपतकालिन वा फायर फाइटिंग।
विपक्षी SAS (Andalusian स्वास्थ्य सेवा): यहाँ हामीसँग धेरै स्थानहरू छन् र ती प्रत्येकको डिग्रीको रूपमा उनीहरूको आवश्यकता हुनेछ। ती सबैको बीचमा हामी अन्य बीचमा प्रशासकीय, अर्डरलीहरू, फार्मेसी टेक्निसियनहरू वा फिजियोथेरापिस्टहरू हाइलाइट गर्दछौं। परीक्षा को रूप मा, यो सैद्धांतिक भाग र एक व्यावहारिक पाठ्यक्रम, प्रतियोगिता प्रतियोगिता बिर्सनु बिना, जहाँ प्राप्त योग्यता जोडिने छ।
विपक्ष पोस्ट गर्नुहोस्: आवश्यकताको रूपमा, तपाईंलाई ESO डिग्री वा यसको बराबरको आवश्यक हुनेछ र पहिले नै १ 18 बर्षको उमेर पुगेको छ। परीक्षाको लागि तपाईले एउटा टेस्ट पास गर्नु पर्ने हुन्छ सामान्य र दुई विशेष भनिन्छ, जहाँ साइकोटेक्निक्स पनि मुख्य पात्र हुन्छन्। यी प्रतियोगिताहरूमा, हामी बिभिन्न स्थानहरू (कार्यकारी, आधिकारिक, वर्गीकरण, कास्ट वा सहायकहरू) पनि भेट्टाउनेछौं। थप रूपमा, तिनीहरूसँग एक रोजगार बैंक छ जसले तपाईंलाई विभिन्न स्थानहरूमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ जब हामी हाम्रो स्थानको लागि पर्खन्छौं।
न्याय विपक्ष: न्यायको विपक्षमा हामी तीन राम्रा भेदभाव भएको शरीर पाउँछौं। प्रक्रियात्मक व्यवस्थापन जसको लागि डिप्लोमा वा युनिभर्सिटी डिग्री आवश्यक हुन्छ, त्यसपछि हामीसँग प्रोसेसरल प्रोसेसिंग बॉडी हुन्छ जहाँ स्नातक डिग्री आवश्यक हुन्छ। अन्त्यमा, उसलाई लागि न्यायिक सहायता को शरीर ESO को डिग्री वा यस्तै मिल्दो हो। एक पटक तपाईंको विरोध स्वीकृत भएपछि, तपाईं आन्तरिक पदोन्नतिमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। गर्नुपर्ने कामहरू केहि फरक छन्, तर ती सबै अभियोजकहरू र न्यायिक कार्यालयहरू बीच गरिन्छ।
निजामती कर्मचारी हुनुका फाइदाहरू
सार्वजनिक प्रशासनले कामहरू प्रदान गर्दछ, जसको लागि धेरै व्यक्ति महिनौं वा बर्षको लागि तयार हुन्छन्। एउटा ठूलो प्रयास सार्थक छ किनकि एकपटक विपक्षीको मृत्यु भयो भने हामीसँग सरकारी कर्मचारी हुनुका धेरै फाइदाहरू हुनेछन्।
एक स्थायी स्थिति को सुरक्षा: काम हाम्रो जीवनको एक अनिवार्य अंश हो। उहाँलाई धन्यवाद, हामी एक तलब प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछौं जुन हामीलाई केही सुविधाको साथ बाँच्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए सिभिल अफिसर हुनु भनेको सुरक्षालाई जनाउँछ। प्रत्येक महिना हामी हाम्रो तलब, साथै प्रत्येक वर्ष थप भुक्तानी को एक जोडी प्राप्त गर्नेछौं। यस फाँटमा, छाना बारम्बार हुँदैन, किनकि तपाईं अवकाश उमेर पुग्दा सम्म तपाईं काम गर्न सक्नुहुनेछ।
राम्रो छुट्टी छुट्टी: सबै काममा छुट्टीको अवधि पनि सामेल हुनुपर्दछ। यो सत्य हो कि यो सधैं कामको प्रकारमा निर्भर हुँदैन। थप रूपमा, धेरै अवस्थाहरूमा बाँकी दिनहरू उल्लेखनीय रूपमा कम हुन्छन्। त्यसैले एक नागरिक कर्मचारी हुनु को अर्को फाइदा अधिक छुट्टी दिनहरु छ।
तालिका: यो सत्य हो कि तपाईले तालिकाको श्रृंखलालाई आदर गर्नु पर्नेछ, दुबै प्रविष्टि र बाहिरिनुका लागि। तर यस अवस्थामा, यो प्राय जसो तपाईं लामो समय बस्नु हुँदैन। धेरै अन्य कार्यहरूमा हामी भाग्यमा भाग लिन्छौं भनेर बताइएको छ कि हामीले केही अन्य प्रकारका कागजहरू समाप्त गर्नु पर्छ। थप रूपमा, स्टालहरूको विशाल बहुमतमा, तपाईंलाई कफि लिन ब्रेक हुनेछ।
कामगार अधिकार सुधार गर्नुहोस्: कुनै श doubt्का बिना, कामदारको अधिकार नागरिक कर्मचारीहरु बीच ठूलो परिवर्तन छ। अवकाश र योगदानहरू जस्ता मुद्दाहरू, सधैं स्थिर र सम्मानित पोइन्टहरू हुन्छन्।
स्थानान्तरण प्रतियोगिता: यो सत्य हो कि यो प्रस्ताव गरिएको बहुमत बहुमतका लागि पनि ठूलो फाइदा हो। त्यो हो, तपाईंसँग भौगोलिक गतिशीलता छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने। यद्यपि यो औंलाले हुने छैन, तर प्रतियोगिता चरणबाट। सायद शिक्षकहरूका लागि यो अलि जटिल छ, तर यो अझै पनि राम्रो फाइदाका रूपमा लिन सकिन्छ विचार गर्न।
विपक्षका प्रकार वा सार्वजनिक कर्मचारीहरु त्यहाँ केवल चार छन्, आवश्यकतामा निर्भर गर्दै, काम आफै र स्थितिहरू।
क्यारियर अधिकारी: हामी उनलाई साधारणतया सिभिल अफिसको रूपमा चिन्छौं। यो व्यक्ति हो जो सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएको छ। अर्को शब्दहरुमा, यो एक स्थिर स्थिति पछि एक विपक्ष पारित गरे र एक ठाउँ प्राप्त गरे। यस प्रकारका कार्यकहरू भित्र, हामी वर्गीकरण भेट्टाउँछौं, तिनीहरूलाई आवश्यक अनुसार शीर्षकहरू अनुसार।
समूह A: पहिलो समूहलाई A1 र A2 मा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। दुबै एक र अर्कोमा, तपाईंलाई यी विश्वविद्यालयहरूको लागि आवेदन दिन सक्षम हुन विश्वविद्यालय डिग्री आवश्यक हुन्छ।
समूह बी: समूह बी मा विपक्षमा पहुँच गर्न, तपाईलाई सुपीरियर टेक्निशियनको शीर्षक चाहिन्छ।
समूह सी: यहाँ हामी तथाकथित C1 पनि भेट्टाउनेछौं। तिनीहरूमा स्नातक डिग्री आवश्यक छ, जबकि C2 को लागी, ESO डिग्रीमा स्नातक आवश्यक छ।
कार्यवाहक अधिकारीहरु: विपक्षीहरू तयार पारे पनि, यो पहिलेका भन्दा फरक छ किनकि यसको कामहरू तिनीहरू स्थिर छैनन्। अवश्य पनि, उनीहरूले गर्नु पर्ने कामको कार्यहरू क्यारियरका अधिकारीहरूको समान हुनेछन्। तर ईन्टरनहरू देखा पर्दछ जब त्यहाँ अधिक काम छ वा त्यहाँ केही खाली ठाउँहरू छन् जुन भर्न आवश्यक छ वा यो प्रतिस्थापन हो।
श्रम कर्मचारी: तिनीहरूसँग एक अनुबन्ध छ जुन सार्वजनिक प्रशासनबाट आउँदछ। भन्नुभयो अनुबंध अनिश्चित, स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छ।
अस्थायी स्टाफ: यस अवस्थामा हामी कामको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन प्राय: परामर्शको लागि हो र जसको नामले सुझाव दिन्छ यो अस्थायी हो।
म एउटा विपक्षको अध्ययन गर्न चाहन्छु, कसरी सुरु गर्ने?
यहाँ एक विपक्षको अध्ययन सुरु गर्न को लागी सुझावहरूको एक श्रृंखला हो र मर्न कोशिस गर्दै:
तपाईंले सँधै केहि सेट गर्नुपर्नेछ निश्चित अध्ययन घण्टा। किनकि दिनचर्या जहिले पनि सन्तुलन र हाम्रो शरीरलाई उत्प्रेरणाको आधार हुन्छ।
अलि अलि गर्दै अध्ययन सुरु गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस् कि विपक्षीहरूले समय लिन्छन् र यसलाई राम्रो बनाउन राम्रो हुन्छ यदि हामी राम्रो परिणाम चाहन्छौं भने। अवश्य पनि, यस अवस्थामा, सबैले आफ्नो लक्ष्यहरू सेट गर्न सक्दछन्। थोरै समयका साथ सुरू गर्न सुझाव दिइन्छ, केहि मिनेट तर राम्रोसँग केन्द्रित। एकाग्रता सधैं राम्रो शिक्षाको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
सँधै सम्झनुहोस् तपाईको प्रेरणा। यदि तपाईं यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने, यो यो मानिन्छ किनभने तपाईं यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ, तपाईं राम्रो चीजहरूमा प्रतिबिम्बित गर्नुभयो जुन विपक्षमा पारित गरेपछि तपाईंलाई छोड्नेछ। त्यसोभए जब तपाइँ यस्तो महसुस गर्नुहुन्न, सँधै प्रेरणालाई सम्झनुहोस् र लक्ष्यलाई कल्पना गर्नुहोस्।
यदि शीर्षक तपाईले सोचे जस्तो गरीएको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। किनभने यदि तपाईं केवल यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं धेरै समय र जित्नुहुनेछ। सबै मुद्दाहरू यति गाह्रो हुनुपर्दैन, केहि त्यस्तो चीजको माग नगर्नुहोस् जुन समाधान छ।
विपक्षीहरू मानौं त्यो काम हो। यो सत्य हो कि सुरुमा यो पारिश्रमिक होईन, तर हामीले त्यसलाई त्यस तरिकाले लिनुपर्दछ। पहिलो परिवर्तनमा दिक्क नहुनुहोस्, संगठित हुनुहोस् र धेरै सन्तुष्ट नहुनुहोस्।
त्यहाँ मानिसहरु छन् जसले सुरू गर्दछ दिनको तीन घण्टा अध्ययन पहिलो महिना को समयमा। तर हामीले सूचित गरिसकेका छौं, त्यहाँ विश्रामहरू पनि हुन सक्दछ, तर सधैं सघन एकाग्रता। त्यसो भए पछिल्लो महिना तपाईले आफ्नो अध्ययन दिन विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
जहिले पनि, यो केहि गर्न दुख छैन नक्कल परीक्षा को प्रकार। यस तरीकाले तपाईसँग केहि निश्चित सम्पर्क हुनेछ तपाईले खोज्न लाग्नु भएको ठूलो दिन आउँदा, र तपाईले आफ्नो ज्ञान परीक्षामा पार्नुहुनेछ।
याद गर्नुहोस् कि पहिले यो पढ्न सुझाव दिइन्छ, त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखांकित गर्नुहोस् र अवधारणाहरू ठीक गर्न सारांशहरू बनाउनुहोस्।
के विपक्ष पार गर्न गाह्रो छ?
उत्तर दिन यो सजिलो प्रश्न होइन। केहि भन्दा बढि किनभने कठिनाइ भित्र त्यहाँ बिभिन्न बिन्दुहरु पनि छन्। ती मध्ये एक विपक्षको प्रकार हो जुन हामी आफैंमा प्रस्तुत गर्दछौं, साथै यसको समूह A, B वा C भित्र यसको मापन, त्यहाँ समय हुनेछ जुन हामी यसलाई समर्पण गर्छौं, किनकि यसले धेरै लगनशील प्रयास गर्छ। र कार्य, साथ साथै संगठन।
यी सबैको लागि, यो दिमागमा लिनुपर्दछ कि धेरै मानिसहरूले वर्षौं खर्च गर्छन् अनुमोदन गर्नु अघि। तर यो सबै छोड्ने बारे हो, लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दै र यसको लागि जाने। साना चरणहरूमा पनि, तर तपाईं जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबै प्रकारका साक्षीहरू भेट्टाउँछौं, जहाँ केहि संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ कि यो जटिल भएको छ, जबकि अरूले वर्णन गरेको जस्तो फेला परेन। यसैले हामी भन्छौ कि यो व्यक्ति, उनीहरूका कार्य गर्ने विधि र उनीहरूको दृढ संकल्पमा निर्भर गर्दछ।
एक आधिकारीक कति चार्ज गर्दछ
El एक अधिकारी को तलब यो तपाईंले विरोध गरेको समूहले निर्धारण गर्दछ। तर थप रूपमा, केहि अन्य कारकहरू थपिएका छन् जस्तै गन्तव्य वा स्थितिमा समयको लम्बाइ। तर लगभग तलब निम्नलिखित छन्:
समूह A1: तपाइँको तलब प्रत्येक महिना २,2.800०० युरो भन्दा बढी छ। यस समूहमा श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वित्त वा राज्य प्रशासन को उच्च निकाय को निरीक्षकहरु छन्।
समूह A2: यस मामलामा तलब प्रति महिना २,२०० यूरो हुन्छ र दुई थप भुक्तानी। यस समूहमा हामी अडि ,्ग, फाइनान्स वा प्रणाली व्यवस्थापन, साथ साथै सूचना प्रविधिको लागि प्राविधिक अधिकारीहरू फेला पार्न सक्छौं।
समूह बी: यदि तपाईंसँग उच्च तकनीकी योग्यता छ भने, तपाईं यो समूह पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। उसको तलबको रूपमा, यो लगभग १1.800०० यूरो हुनेछ।
समूह C1: प्रशासनिक निकाय सामान्यतया यो समूहमा अवस्थित हुन्छ। आवेदन गर्नको लागि तपाईलाई स्नातक डिग्री चाहिन्छ। तलब १,1.600०० यूरो बीच छ।
समूह C2: यहाँ हामी सहायक निकायलाई भेट्दछौं, जसलाई एक आधारभूत आवश्यकताको रूपमा ESO को शीर्षक चाहिन्छ। तिनीहरूले लगभग 1200 यूरो चार्ज हुनेछ।
समूह E: जुनियर स्टाफको अनुमानित तलब १००० यूरो हुनेछ।
के हुन्छ यदि मैले विरोधको लागि परीक्षा असफल गरें भने?
यो सत्य हो कि सबै समय पछि प्रयास, यो निलम्बित भएको देखेर धेरै निराश पार्नुपर्दछ। त्यसोभए हामीले के भएको छ भनेर स्वीकार्न प्रयास गर्नुपर्दछ, यदि यो सजिलो छैन भने पनि। निम्न दिनहरू, यो आराम र रमाईलो गर्न सुझाव दिइन्छ। यो क्षण हो आफैलाई प्रतिबिम्बको समय दिन र सकेसम्म सबै चीज बिर्सनुहोस्।
तपाईंले सकारात्मक पक्षमा हेर्नु पर्छ। किनकि यो सबै सिक्ने बारे हो र हरेक पटक हामी आफ्नो लक्ष्यको नजिक हुनेछौं। जुन अर्को पटक हामी देखाउँदा अझ बढी अनुभव थप्दछ। यद्यपि विपक्षीको परीक्षा स्थगित गर्नुहोस्, यो अन्त छैन। यो एक त्रुटि हो कि त्रुटिहरू पत्ता लगाउन र प्रविधिको सुधार गर्न को लागी अर्को आशावादी तरीकामा अर्को परीक्षा लिन सक्षम हुनु हो।